Nezvedu - Changzhou Sunrise Steel Ball Co, Ltd.
Inobuda zuva kambani yesimbi bhora yakavambwa muna 1992. Isu takanangana nekugadzirwa kwesimbi bhora uye takabatanidza sicentific research uye commeicial kutengeserana.
Kwemakore mazhinji, zvichibva pahwaro hwewujin Metallic Ball Institute, isu tinozvipira tisingaregi pachayo kutsvagisa uye nekugadzira iyo yakaumbwa simbi yesimbi bhora uye kunyanya kugadzira mabhora esimbi senge chrome simbi mabhora (aisi52100), kabhoni simbi mabhora (aisi1015) simbi isina simbi. mabhora (aisi304.316.420.440c) .Aya mabhora anoshandiswa zvakanyanya mumabheyaringi mota, chishandiso chemagetsi, njanji inotungamira zvichingodaro
Kwemakore, Isu takazvipira kutsvagisa nekusimudzira kwesimbi bhora kugadzira tekinoroji yakavakirwa paWujin simbi bhora Research Institute. Iyo inonyanya kugadzira 1-16mm chromium simbi (aisi52100), yakatakura simbi bhora, kabhoni simbi (aisi1015.1045.1085), isina simbi bhora (aisi304.316.420.440c), chiwanikwa chesimbi bhora, mhangura bhora uye mamwe mabhora esimbi. Inoshandiswa zvakanyanya mumabheyaringi, mota, maturusi emagetsi, njanji dzekutungamira, bhora rack nezvimwe zvigadzirwa. Inovimbwa zvakanyanya uye inodiwa nevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Panguva imwecheteyo, zvakare inogadzira inobhururuka saucer bhora uye yakasarudzika-yakaita simbi bhora kushandiswa.
Yakagadzira yakasarudzika inoumbwa neyekupisa yekurapa tekinoroji, kubva kune waya kudhirowa, inotonhora pier, yakatsetseka bhora, kupisa kurapwa, kukuya, kupedzisa, kupukuta, kuchenesa kuongorora, kurongedza, uye nhevedzano yezvakaitika kubva kune semi-apera zvigadzirwa kusvika apedza bhora kutengesa.
Inogona kuyedza ese marudzi emakemikari zvinhu, zvemagetsi zvivakwa uye zvemukati musangano pasi peIO17025 standard. Ita shuwa kuti iro dhipatimendi rekusimbisa mhando rinogona kuwana rakasimba uye rakaringana dhata rekusimbisa mune yese nzira yekugadzira kubva kune zvakasvibirira zvinhu zvinopinda mufekitori kune chigadzirwa dhirivhari, uye zvinopa zvinoramba zvichiongorora dhata kuunganidza kune iro rehunyanzvi dhipatimendi uye vatengi veongororo nekusimudzira kwezvinhu zvitsva. nemaitiro matsva.
Yedu ina simbi yekugadzira bhora mitsara zvese zvinodzorwa nekombuta. Nekuda kwekudzikiswa kukuru kwekupindira kwemaoko uye maitiro ekuchinja, chigadzirwa chedu chigadzirwa chakatsiga zvakanyanya kunyange mumabatch akasiyana. Kushandisa zvigadzirwa zvedu zvinogona kusangana zvaunoda zviri nani.
Magadzirirwo Of Quality System
Iine inozivikanwa kwazvo manejimendi sisitimu, isu takapfuura angangoita makumi matatu epasi rese uye emabhizimusi zvitupa, senge ISO9001, NQA ISO14001, OHSAS18001, BV, nezvimwe; panguva imwecheteyo, mhando yekutonga mhando yezvigadzirwa zvedu zvakasiyana siyana yakaongororwa zvakanyanya neNokia, GE uye mamwe mabhizinesi mazana mashanu.
3mm Mhangura Bhora, Brass Bhora, Solid Mhangura Bhora, Solid Brass Bhora, 3mm Brass Bhora, Ss304 Simbi Bhora,